Famous singer May Sweet dies at the age of 49 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » Famous singer May Sweet dies at the age of 49
Posted by manawphyulay on Mar 12, 2011 in Entertainment, Hoax, Music, Myanma News, News | 8 comments
The Irrawaddy News Magazine >>>>> said>>>
May Sweet, one of Burma’s most famous and celeberated singers in Burma, died yesterday evening at New York General Hospital fromaruptured artery in her stomach.
Yes or No ?????????
ဧရာဝတီ အင်္ဂလိပ်ပိုင်း ဝက်ဘ်ဆိုက် အတိုက်အခိုက် ခံနေရ
ဧရာဝတီ သတင်းစာမျက်နှာ ဝက်ဘ်ဆိုက် အင်္ဂလိပ်ပိုင်းမှာ မနေ့ည သန်းခေါင်လောက်က သတင်း ၂ ပုဒ် တက်လာပါတယ်။ တပုဒ်ကတော့ အဆိုတော် မေဆွိ သေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ။ အဲဒီသတင်းဟာ ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်းက ရေးပြီးတင်တဲ့သတင်း လုံးဝ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဒီနေရာက ရှင်းပါရစေ။ မမေဆွိ အနေနဲ့ ဒီသတင်းကို ဖတ်ပြီး သူ့ရဲ့ facebook မှာ ရှင်းထားတဲ့အပြင် ဧရာဝတီကိုပါ သတင်းမှားရေးတယ်ဆိုပြီး တော်တော် ဒေါသထွက်နေပုံရပါတယ်။
အဲဒီသတင်းတွေက ဟက်ကာတဦးဦး ဒါမှမဟုတ် တဖွဲ့ဖွဲ့က ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိနဲ့ တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ မမေဆွိ သေတယ်ဆိုပြီး ၂၀၀၈ နှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်က တခါ အေပီ သတင်းဌာန အမှတ်တံဆိပ်ကိုသုံးပြီး လူတဦး သို့မဟုတ် လူတစုက လုပ်ဖူးပါသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဒီဘက်က မီဒီယာတွေတောင် အေပီက ထွက်တာပဲ ဆိုပြီး သတင်းလိုက်ဖို့ လုပ်ကြပါတယ်။ နောက်တော့မှ မဟုတ်ကြောင်း သိရတာပါ။ အခုကတော့ ဧရာဝတီဆိုက်ကို တမင် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ထင်ရောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင်လုပ်တာပါ။
နောက်သတင်းတပုဒ်က ပိုဆိုးပါတယ်။ ဧရာဝတီကို NLD နဲ့ ရန်တိုက်ပေးသလို ရေးထားတဲ့ သတင်းပါ။ ဧရာဝတီ၊ DVB စတဲ့ မီဒီယာတွေ ဒိုနာတွေဆီက ရနေတဲ့ ငွေကြေး အလျှော့ခံရတဲ့အတွက် NLD ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုပြီး ရေးထားပါတယ်။ နောက်ထပ် ဘာတွေ ထပ်လုပ်ဦးမယ်ဆိုတာ မပြောနိုင်ပါဘူး။
ထင်ရောင်ထင်မှား ဖြစ်စရာတွေ၊ ပြဿနာ တက်စရာ၊ အငြင်းပွားစရာတွေနဲ့ ရန်တိုက်ပေးတဲ့ ပုံစံမျိုးကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီကိစ္စကို ဧရာဝတီက ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by yokekhasoe at 12:21 PM
Announcement From Irrawaddy
The Irrawaddy websites was hacked this morning andanumber of fake articles were posted on our English-language homepage.
We are currently trying to fix the problem and protect our website from further intrusion.
We apologize for any inconvenience and misunderstanding caused by the hacker’s postings.
ခုနကပဲ.. အယ်လ်အေမှာလုပ်မဲ့ပွဲ..မေဆွိပါမယ်ဆိုလို့ ..ဖလိုင်ယာကို.. မေဆွိနာမယ်.. ထပ်ဖြည့်ဖို့အကြောင်းပြောနေတယ်..။
ပေါက်တပ်ကရတွေဗျ…။ အရင်တခါကလည်း မေဆွိကို သေတယ်လုပ်ကြပြီးပြီ..။
အခုတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကျေးဇူးနဲ့.. လူတွေချစ်တဲ့မေဆွိ ဘာမှမဖြစ်ကြောင်း ..သူ့ဖေ့စ်ဘုတ်မှာတင်တဲ့အတိုင်း ကူးပေးလိုက်ပါတယ်..။
My fans around the world,
I just receivedadisturbing call fromafriend of mine from Aussie that told me about rumors spreading from The Irrawaddy News…
Rest assure that I am doing just fine and spendingaFriday evening in with my hubby in the Delaware. Both the writer Violet Cho and the editor are as stupid and uneducated as one can think off!!!
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် အရမ်းသိချင်နေလို့ တင်လိုက်တာပါ။ ဘာလို့ မမှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေ ဘယ်သူတွေက ထုတ်လွှင့်နေကြပါလိမ့်။ တော်သေးတယ် မသေဘူးဆိုလို့ အလွန်ဝမ်းသာမိပါတယ်ရှင်။
တော်ကြာ ရဲလေးသေလိုက် တော်ကြာ မေဆွိသေလိုက်နဲ့
ဘယ်လို ကောလဟာလတွေမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး
ယတြာချေနေကြတာလား မသိဘူး ….
ဟုတ်ပါ့ … တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် သေနေကြတာ … တစ်ကယ် ဟုတ်လား မဟုတ်လားတော့သိချင်တယ် …
မေဆွိသေတာမဟုတ်ပါဘူး ဒီလင့်မှာ သွားဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ